Myanmar Young Entrepreneurs Association (MYEA) မှ စီစဉ်ကျင်းပခဲ့သည့် Angel Investment ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ငွေကြေးထည့်ပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ လုပ်ငန်းများနှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နှိုင်ပုံနှင့် လုပ်ငန်း၏ ရှယ်ယာခွဲဝေမှု သဘောတရားများအား ဆွေးနွေးဖလှယ်သည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းအရာများအား စွန့်... More
What is FDI? - နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဟူသည်
What is Foreign Direct Investment - FDI? နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုတာကတော့ နိုင်ငံတကာမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တွေကို ပေါင်းစုပေးခြင်းဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ FDI ကြောင့် နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လာရောက်ပြီး တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပြင်၊ ရေရှည... More
မြန်မာနိုင်ငံဟာ 676,577 sq km ကျယ်ဝန်းပြီး (Eastern Hill Region, Central Valley Region, Western Hill Region) ဆိုပြီး အပိုင်း (၃) ပိုင်း ခွဲခြားထားပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ (1) တရုတ်နိုင်ငံ (Sharing Borders – 2,204 km) ၊ (2) ထိုင်းနိုင်ငံ (Sharing Borders – 2,107 km) ၊ (3) လာ... More
Bank Loan Data - ဘဏ်မှ ငွေချေးရန် သိထားသင့်သည့်အချက်များ
ဘဏ်မှငွေချေးယူလိုပါက - ဦးစွာငွေချေးယူမည့်ဘဏ်တွင် ဘဏ်ချေးငွေအတွက် သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် လျှောက်လွှာတင်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာဘဏ်ချေးငွေဌာန မန်နေဂျာမှတစ်ဆင့် အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်သွားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ - စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုနှင့် လုပ်ငန်းအပေါ်မူတည်ပြီး ဘဏ်ချေးငွေကို တစ်ပတ်ဆက်ရက်အတွင်း ထုတ်ယူနိုင်သည်။... More
Doing Business in Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု
Ranks of Myanmar in Doing Business (မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အဆင့်တိုင်းတာမှု
- In 2014 Report 182 - In 2015 Report 177 - In 2016 Report 167 Objective of Foreign Investment in Myanmar (မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နိုင်ငံခြားရင်... More